किन रोइन् कट्रिना ? सलमानले यसरी मनाए
मुम्बई । बलिवुडमा सलमान खान र कट्रिना कैफको सम्बन्धमा धेरै उतार चढाव देखिएको छ ।
सुरुमा सलमानको सहयोगमा बलिवुडमा आफ्नो सिक्का जमाउन सफल कट्रिनाले पछिल्लो समय आफ्नो अभिनय र क्षमताले दर्श्को मन जित्न सफल भएकी छन् । अहिले एक पछि अर्को गर्दै बलिवुडका तिनै खानसँग अभिनय गरिरहेकी छन् ।
सलमान खानसँग टाइगर जिन्दा है आगामी डिसेम्बर २२ मा रिलिज हुदै छ भने आमिर खानसँग ठग्स अफ हिन्दुस्तानको सुटिंग अहिले भैरहेको छ भने त्यसपछि किंग खान शाहरुख खानसँग फिल्म गर्दिया छन् ।
अहिले टाइगर जिन्दा है को प्रमोशनमा व्यस्त रहेकी कट्रिना आफ्ना पुर्वप्रेमी सलमानसँग फेरी नजिकिन लागेको रिपोर्टहरु आइरहेका छन् ।
हालै कट्रिना र सलमान टेलिभिजन डान्स शो डान्स च्याम्पियन्समा आफ्नो फिल्मको प्रमोशनका क्रममा कट्रिना रुन लागेपछि शो को शुटिंग नै अवरुद्ध भएको रिपोर्ट आएको छ । शोमा एक प्रतियोगीले सलमान खानको फिल्म ‘तेरे नाम’ को एक गीतमा गरेको प्रफरमेन्स देखेर कट्रिना रोएकी थिइन् । कट्रिना रुन थालेपछि शो केहीबेर अवरुद्ध भएको थियो ।
कट्रिना रुन लागेपछि सँगै रहेका सलमानले कट्रिनालाई खुशी बनाउन आफ्नै गीतमा डान्स गर्न थालेका थिए । त्यसपछि दुबैले स्नागे डान्स गरेर स्थितिलाई सम्हालेका थिए ।
फिल्म रिलिजको संघारमा हिरो हिरोइनको अफयेर्सको चर्चा चल्ने कुरा पुरानै भएपनि सलमान र कट्रिनाको केमेष्ट्री हेर्दा दुवै बीच केहि न केहि चक्कर चलेको अहिले बलिवुडमा चर्चा चलेको छ । सलमान पछि रणवीर कपुरसँग प्रेममा परेकी कट्रिना, रणवीरसँगको ब्रेकअप पछि सिंगल रहेकी छन् । सलमानको भने कट्रिनासँगको ब्रेकअपपछि रोमानियन लुलिया भेन्तुरसँग रिलेशनसिपमा रहेका छन् ।
अहिले सलमान र कट्रिनाको अहिलेको केमेष्टी फिल्म चलाउन मात्र हो या व्यक्तिगत सम्बन्धमा पनि यसको असर पर्छ त्यो हेर्न भने केहि समय पर्खिनु पर्ने देखिन्छ ।
नो इन्ट्रीको रिमेकमा सलमानको ठाउमा अर्जुन कपुर !
मुम्बई। आफ्नो लभ लाइफका कारण चर्चामा रहेका अभिनेता अर्जुन कपुरले अभिनेता सलमान खानलाई रिप्लेस गर्दै फिल्म नो इन्ट्रीको सिक्वेलमा काम गर्ने भएका छन्। अरबाज खानसँग डिभोर्स गरेकी मलाइका अरोरासँगको प्रेमका
अरबाज दोस्रो विवाह गर्ने तयारीमा, सलमानले दिए स्वीकृति
मुम्बई। बलिवुडमा अफयेर्स र ब्रेकअपको जहिले पनि चर्चा बढी नै हुने गर्दछ। स्टारहरु एक ब्रेकअप पछि अर्को सम्बन्ध बनाएको खबर सबैका लागि चासोको विषय हुने गरेको पाइन्छ। यसैबीच सुपर स्टार सलमान